ओलीले पत्रकारलाई झपार्दै भने- तिमि हैन, तपाई लेख्नुहोस — Sanchar Kendra
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकारहरुलाई ‘तिमी’ नभई ‘तपाई’ लेख्न सुझाएका छन् । प्रेस संगठन नेपालको ओलीपक्षीय भेला काठमाडौंको सभागृहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अंग्रेजीमा ‘यू’ भन्दा बच्चादेखि बृद्धसम्मलाई पुग्ने गरेपनि नेपालमा भने त्यस्तो लेख्न अस्वोभनीय भएको उल्लेख गरे ।
नेपालको आफ्नै मूल्य र मान्यता भएकाले पश्चिमालाई पच्छ्याएर मिडियाकर्मीहरुले सबैलाई ‘तिमी’ भन्न वा लेख्न नमिल्ने बताए । राजा महाराजहरुको पालाको बोली चालीलाई स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले गणतन्त्र आयो भन्दैमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जो कोहीलाई पनि ‘तिमी’ भन्न नमिल्ने उल्लेख गरे ।
उनले पत्रकारहरुलाई स्वार्थका लागि कलम नचलाउन आग्रह गरे । कसैसँग रिस उठ्यो भन्दैमा उसका विरुद्ध अनावश्यक कुरा नलेख्न उनले सुझाए । ओलीको यस्तो भाषण सुनेर फर्किएका एक पत्रकारले भने-उहाँले त् तिमि हैन तपाई लेख्नुहोस् भनेर पुरै झप्राने शैलीमा पो दिनुभयो !’
उनले भारतीय पत्रकार सुधीर चौधरीको बचाउ गरेका छन् । राष्ट्रिय सभागृहमा प्रेस संगठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय भेलालाई ‘विशेष सम्बोधन’ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चौधरीको बचाउमा केही शव्द खर्च गरेका हुन् ।
पत्रकार चौधरीले केही हप्ताअघि प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता लिएपछि सगरमाथमा पुगेर सगरमाथा भारतले दावी गर्नुपर्ने आशयको समाचार प्रसारण गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली र उनको आलोचना भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अस्ति एउटा विदेशी टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिएँ । आलोचना गर्ने ठाउँ कहिँ भेटिएनछ । अनि त्यो पत्रकारले इन्डियामा गएर एभरेष्टको नाम किन राखेको ? हाम्रो मान्छेले गएर पहिला नापेको थियो । त्यही कुरा उसले बोल्दा यहाँ राष्ट्रवादको बबन्डर मच्चियो, प्रधानमन्त्री ओलीले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘उसले सगरमाथा खान्छु भनेको छ र ? यतिसारो बहकिनुपर्ने पनि आवश्यकता छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रवाद भनेको तमासा गर्ने कुरा नभएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रवाद ड्रामा हो ? राष्ट्रवाद ड्रामा होइन, राष्ट्रको हितको पक्षमा उभिने कुरा हो ।’
चौधरीले सगरमाथाको नाम ‘माउन्ट एभरेष्ट’ नभएर ‘माउन्ट सिकदर’ राख्नुपर्ने बताएका थिए । उनले भारतीय राधानाथ सिकदरले सगरमाथाको उचाई पहिलो पटक नापेको दाबी गर्दै यसको नाम पनि उनकै नामबाट राखिनुपर्ने बताएका हुन्।
जी न्यूजका प्रधान सम्पादक चौधरीले नाम मात्र फेर्ने नभएर सगरमाथा माथि भारतले दाबी गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘माउन्ट एभरेष्टको नाम राधानाथ सिकदरको नामबाट हुनुपर्छ’, प्रशारित कार्यक्रममा उनले भनेका छन् ‘यसका लागि भारतले अभियान चलाउनुपर्छ, र हामीले विश्वसामु हाम्रो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ।’
ओलीले नेकपाको दाहाल–नेपालसमूहले देशलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने कोसिस गरेको आरोप लगाएका छन् । भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले दाहाल–नेपालसमूहले चलचित्रमा जस्तै तमासा देखाएको पनि आरोप लगाए ।
दाहाल–नेपालसमूहतर्फ प्रहार गर्दै ओलीले भने, ‘हामी आवेश र उत्तेजनामा छैनौं, आक्रोशमा छैनौं, प्रतिसोधमा पनि छैनौं । हामी रातो झन्डा फहराउनेवाला हौं । पेरिसडाँडमा जस्तो कालो झन्डा फहराउने होइनौं । रातो बेलुन उडाउने वाला हौं, कालो बेलुनवाला होइनौं । हामी सडकमा हिँड्दा रातो झन्डा बोक्ने वाला हौं, कालो झन्डा बोक्ने वाला होइनौं । हामी रातो र उज्ज्यालो भविष्यतर्फको हौँ, अन्धकारतर्फ अनिश्चततर्फको होइनौँ । हामी हाम्रो गन्तव्यमा स्पष्ट छौं–देशलाई बनाउनुछ, सुशासानको बाटोमा लैजानु छ । यसका लागि भ्रष्टाचार समाप्त पार्नुछ । हामी हाम्रो उद्देश्य, गन्तव्य, बाटोमा स्पष्ट छौं । देश बनाउन यही गन्तव्यमा हिँडनुछ ।’
ओलीले दाहाल–नेपालसमूहले चलचित्रमा जस्तै तमासा देखाएको आरोप थियो । ‘समाजमा विभिन्‍न शक्ति, तत्व र व्यक्ति हुन्छन् । उनीहरु स्वार्थका लागि अनेकप्रकारका हाउभाउ गर्छन । जनतालाई सिनेमा देखाउँछन् । हिरो हुन्छ, हिरोइन हुन्छ । उनीहरुबीच लभ परेको हुन्छ । हिरोइन घाइते हुन्छ । हिरो ब्याकुल हुनछ, रुन्छ । तर, वास्तवमा केही होइन । न लभ परेको हो, न घाइते भएको हो । सबै तमासा हो । केही मान्छे नाटक देखाउँन आउछन् । तमासा गर्छन, जनतालाई झुक्काउँछन् । हामीले जनतलाई उनीहरुको तमासाबाट सचेत गराउनुपर्छ ।’
ओलीले दाहाल–नेपालले बुद्धि गलत ठाउँमा लगाएको बताए । ‘मानिसका तीन वटा पक्ष हुन्छन ज्ञानको, बुद्धिको र मतिको पक्ष हुन्छ । सबैभन्दा पहिला देश बनाउने र बचाउने हो भने हाम्रो मति ठीक ठाउँमा राख्नुपर्छ । मति ठीक ठाउँमा राख्नुपर्छ । बुद्धिमान मान्छे मतिभ्रष्ट भए खतरनाक हुन्छ । बुद्धिमान चोर भए पुलिसले पनि पक्राउ गर्दैन । मुर्ख चोर एकछिनमा समातिन्छ । ज्ञान भनेको विषयगत कुरा हो । ज्ञान भनेको इतिहास हो,’ ओलीले भने, ‘ज्ञान भनेको विगत हो । हामीले मतिलाई ठीक ठाउमा राख्ने, आफ्नो बुद्धिको सही ठाउँमा सही प्रयोग गर्ने र आफुले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई आधार बनाएर सिर्जनात्मक ढंगले अगाढि बढ्ने हो । जानेकै ज्ञानमात्र भूतपूर्व कुरा हो । सिर्जनतात्मक भएर मात्र विकास हुन सक्छ । हामी कहाँ छौं र हाम्रो कामको परिणाम के हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्र विकासको क्रमलाई रोक्ने प्रयास भएको बताए । ‘विकासमा बाधा पुर्‍याउने कोशिस हुन्छन् । सामाजिक परिवर्तनमा पनि त्यही भएको छ । हामी ती प्रयास तोडेर अगाडि जान जरुरी छ,’ उनले भने, ‘एउटा खास लडाईंको अवस्थामा छ । संसद्लाई फेरि सांसद किनबेचको, लेनदेनको, समीकरण बनाउने खेल सुरु गर्न खोजे । मैले प्रयास गरेको थिएँ, वाम पार्टी जोडेर एउटा मजबुद शक्ति बनाउने । देशलाई आधुनिक सम्भव बनाउने । तर, पार्टी त तपाईंहरुले देख्नुभयो । एक दिन पनि राम्रो भन्न सकेनन् । आँट नभएको, हुति नभएको र मन नभएको पार्टी भयो । नेतृत्वको यस्तो पंक्ति बनाउन खोजेको थिएँ, तर, देशका लागि होइन, आफ्ना निम्ति मर्ने नेतृत्व भयो ।’
ओलीले समृद्धि, समानता, सुखको लागि आफूहरु राजनीतिक लडाईं लडिरहेको बताए । ‘संविधानको रक्षा गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, लोकतान्त्रिक पर्णालीलाई सही बाटोमा लैजान एउटा राजनीतिक लडाईं लडिरहेका छौँ । बहुतै जिम्मेवारीका साथ, उत्तर दायित्वपूर्ण ढंगले लडिरहेका छौं । यसका लागि हामी पहिला विचारमा स्पष्ट गर्नुपर्छ । हामीले यसका लागि राष्ट्रिय आंशाका, गन्तव्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने तोकेका छौं’, ओलीले भने,‘सामाजिक न्याय र समानता, भयरहित वातावरण हुनुपर्छ, सम्मानपूवर्क बाँच्‍न पाउनुपर्ने अधिकार र अनभूति हुनुपर्छ । अधिकार सम्पन्न, अवसरसम्म पुग्न सक्ने, सभ्य समाजमा मात्र मानिस खुसी हुनु सक्छ ।’